Malaaq Isaaq Ibraahim oo caawa lagu dilay magaalada Muqdisho
Muqdisho:Waxaa Allaha u naxariistee caawa lagu dilay magalaada Muqdisho mid ka mid ah odayaasha dhaqanka ee wax ka soo xulay xilidhaanada DFS, Oday dhaqameedka la dilay caawa ayaa waxaa lagu magacaabaa Malaaq Isaaq Ibraahim. Labo nin oo ku hubeysan Bistoolado ayaa Allaha u naxariistee Malaaq Isaaq Ibraahim waxaa ay ku weerareen gurigiisa waxaan ay huwiyeen rasaas xooggan iyagoo gaarsiiyey dhaawac markii danbe uu u geeriyooday ka dib markii la geeyey Isbitaalka Daaru-shifaa.
Malaaq Isaaq Ibraahim ayaa waxaa uu ka mid ahaa odayaasha dhaqanka ee beelaha Digil iyo Mirifle gaar ahaan beesha Luway. Kooxda dilka u geystay Malaaq Isaaq ayaa goobta ka baxsaday waxaan goobta soo gaaray ciidamo ka tirsan DFS oo sameeyey baaritaan balse aan ilaa hadda ku guulaysan in ay qabtaan kooxdii dilka fulisay.
Malaaq Isaaq Ibraahim ayaa noqonaya oday dhaqameedkii ugu horeeyey oo lagu khaarajiyey magaalada Muqdisho xili odayaasha dhaqanka loogu goodiyey in la khaarajin doona xili ay ku howlanaayeen in ay beel walba soo xulaan cid uga mid noqon doonta Golaha Baarlamaanka DFS.
256,860 Spam Comments Blocked so far by Spam Free Wordpress